အရိပ်ချစ်: March 2013
စိတ်ထပ်ခြင်းဆိုတာ မြန်မာလို လှပအောင် ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ စိတ်ပညာမှာ (Councelling Psychology ) ဆိုတာ ဘာသာရပ်တစ်ခု အနေနဲ့သင်ကြားရပါတယ်...။ မြန်မာလို အတိအကျ ဘာသာ ပြန်ရရင် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးလမ်းညွှန်ခြင်းပေါ့....။
စိတ်ဟာ အရာအားလုံးကို ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်....။ ဖန်တီးပြုပြင်နိုင်တယ်...။ စိတ်ကြောင့်ပဲ ဘ၀တွေ တိုးတက်အောင်မြင်တယ်...။ စိတ်ကြောင့်ပဲ ဘ၀ကို နိမ့်ကျစေတယ်...။ စိတ်ကြောင့် ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းရသလို ...စိတ်ကြောင့်မုန်းတီးနာကျည်းခြင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာရသလို စိတ်ကြောင့်ပဲ ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးခြင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်....။လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို လူတစ်ယောက်က control လုပ်လို့ တော့ မရနိုင်ပါဘူး........။
ဒါပေမယ့်...စိတ်ဒုက္ခ (တစ်နည်း ပြောရရင် စိတ်ဓာတ်ကျ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေ ) ကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အားပေးခြင်းဖြင့် သူ့ စိတ်ကို သူကိုယ်တိုင် ပြန်လည်မြင့်တက်လာစေအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်....။
အဲဒါဟာ Councelling ပါပဲ......။ ပညာရှင်တွေက ဒါကို
"It isaskilled dialogue in which one person helps another who has some personal difficulty"
လူတစ်ယောက်မှာ တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ ဘ၀ပြဿနာ ၊ စိတ်အခြေအနေ ယိုယွင်းမှုတွေကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ခြင်းအားဖြင့် ကူညီ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တာကို ဆိုလိုတာပါ...။ တကယ်ကတော့ စကားပြောပေးတာလို့အကြမ်းဖျဉ်း မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်...။
လူအများစုဟာ (ဘယ်လောက်ပဲ စကားနည်းတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ) မိမိကပဲ ပြောချင်ကြပါတယ်..။ မိမိကပဲ ရင် ဖွင့်ချင်ကြတယ်...။ ကိုယ်ပြောတာကို တစ်ဖက်လူက တလေးတစား နားထောင်ပေးရင် ကျေနပ်ကြတတ် ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်......... သူတစ်ပါးပြောတာကို စိတ်ရှည်ရှည်နားထောင်ပေးဖို့၊ တစ်ဖက်လူ ခံစားရတာ ကို ထပ်တူနားလည်ယုံကြည်ပေးဖို့ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်....။ စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့ သူတွေဆိုရင် စကား ရှည်ရှည် လာပြောတောင် မကြိုက်ကြပါဘူး....။ဒါ့ထက်ဆိုးလာရင် ဆုံးအောင် နားမထောင်ပဲ ထထွက် သွားကြတာတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်......။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ AIDS, HIV ရောဂါ ရှိသူတွေကို ဆွေးနွေးပညာပေးတဲ့ ဌာန နဲ့ ပဲ ဥပမာထားပြီး တင်ပြသွားပါ့မယ်....။
ဆွေးနွေးပညာပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ဆွေးနွေးပေးတဲ့သူကို (Councellor ) လို့ ခေါ်ပြီး....အဆွေးနွေးခံရသူကို (Client ) လို့ ခေါ်ပါတယ်.....။ Client တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှု အလုံးစုံကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ပြီး အကြံပေးတဲ့ Councellor တစ်ယောက်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အရည်အချင်းကတော့ စိတ်ထပ်ခြင်း (empathy) ရှိဖို ပါပဲ.....။
သူ့ ရင်ထဲမှာ ဘာတွေခံစားနေရသလဲ ၊ဘာတွေ အားငယ်နေသလဲ ၊ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေသလဲ ဆိုတာကို ထပ်တူထပ်မျှ လိုက်ခံစား ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်....။ကိုယ်သာ သူ့ နေရာမှာ ရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေး လေး ၀င်လာတဲ့အထိပါပဲ...။
"You put yourself in the person's shoes "
အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိနပ်ထဲ ၀င်လိုက်ပါ ဆိုတာ ကိုယ်က သူ့ ရင်ထဲကို ၀င်ပြီး ခံစားကြည့်တာကို ဆိုလို တာပါ...။
ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့နားလည်ပေးတဲ့အခါမှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကြားမှာ မေတ္တာတရားက မသိမသာလေး လွန့် လူးသွားပါပြီ...။ အဲဒီ့အခါ တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု (stress) ။ စိုးရိမ်သောက (anxiety) ကိုလျှော့ချ နိုင်အောင် နှစ်သိမ့် အားပေးကြရပါတယ်...။ ဘေးကထင်မြင် ချက်ဆိုတာထက် စိတ်ခံစားမှုနှစ်ခုဟာ တစ် ထပ်တည်းကျပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြရင်းက မှန်ကန်မှု အဖြေတွေ လှလှပပ ထွက်လာ တတ်ကြပါ တယ်...။
အားပေးစကားလေးတစ်ခွန်း ၊နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကနေ မထင်မှတ်လောက် အောင် ဘ၀တွေ တိုးတက်အောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့ အထိကို စွမ်းပကားက ကြီးမားလှပါတယ်...။ မိမိကို အခြားသူတစ်ယောက်က ယုံကြည်နားလည်ပေးလိုက်တာ ၊မိမိခံစားနေရတာကို လက်ခံစာနာတာ၊ မိမိနဲ့ထပ်တူ မျှဝေပေးလိုက်တာဟာ လူတစ်ယောက် အဖို့ အကြီးမားဆုံးသော ဆုလာဘ်ကြီး တစ်ခုပါပဲ...။ ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးတဲ့သူတွေ ရှိလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကလည်း အခြားသူတွေအပေါ် ပြန်လည် စာနာ နားလည်လာနိုင်တယ်...။ကိုယ်ချင်းစာတရား တွေ တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး ဆင့်ကဲတိုးပွား များပြားလာရင်းက မေတ္တာတွေပါ ဖြန့်ကျက် လာနိုင်ပါတယ်....။
ဘ၀အခြေအနေ အတော်ဆိုးရွားပြီး အလွန်အမင်း စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတဲ့သူတွေ.ထဲက... အခြေအနေ ပေးတဲ့သူတွေသာ Councellor တွေဆီ သွားကြပါတယ်...။
ဒါပေမယ့် ပုံမှန်ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရင်းက လူတိုင်းဟာ အခြေအနေအမျိုးမျိုး ကြောင့် စ်ိတ်ညစ်ညူး ကြ တယ်..၊ ခံစားနာကျင်ကြတယ်။ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူငယ်ချင်း ၊ မိဘ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ စသဖြင့် အထဲက အမှတ်မထင်ရင်ဖွင့်ပြောကြားလာခဲ့ရင် အနည်းငယ် အချိ်န်ပေးပြီး နားလည်အားပေး လိုက်တာ ဟာ (မိမိ တောင် မသိလိုက်ရဘဲ ) တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လုံးဝကို ထိုးတင်ပေးနိုင်လိုက်တာပါပဲ.....။
စကားလေး တစ်ခွန်းကနေ ကုသိုလ်တွေ ပြုလိုက်တာပါပဲ.....။ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့မျှဝေခံစားပေး လိုက် ခြင်းဟာ ဘ၀တွေကို ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့အထိကို တာသွားနိုင်ပါတယ်....။
စိတ်နဲ့ ဖန်ဆင်းတည်ဆောက်နေရတဲ့ လောကကြီး အလယ်မှာ စိတ်ထပ်ခြင်းအနုပညာဟာ မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင် စွမ်းပကားကြီးမားလှပါတယ်.............။ ။
Posted by Ayeit Chit at 03:39 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 19:47 No comments:
ခုတစ်လော မိုးရာသီဆိုပေမယ့် မိုးမရွာလို့ ရှိရင် အရမ်းပူပါတယ် အဲဒီတော့ ချွေးထွက်တွေများပြီး သွေးတိုးမရှိတဲ့ လူတွေ က သွေးပေါင်အရမ်းကျ ကျပါတယ်. . . သွေးတိုးရင်တော့ သွေးပေါင်ကျအောင် လုပ်ရသလို သွေးပေါင်ကျရင် လည်း သွေးပေါင်ပြန်တက်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်. . ဒါပေမယ့် မကျခင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကိုသိထားရင် လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်.
သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရာ ဆားကို အသုံးပြုပေးပါ. . . သွေးပေါင်ချိန် ပုံမှန်ရှိသူ တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဆားပါဝင်သော အစားအသောက်ကို စားသုံးပေးပါ . . ဆားလက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဝက်ခန့်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက်နှင့် ဖျော်၍ နေ့စဉ်သောက်သုံးပေးလျှင် ကောင်းမွန်ပါတယ်.
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးလျှင်လည်း သွေးပေါင်ချိန်ကျစေပြန်ပါတယ်. . . . သွေးပေါင်ချိန်ကျနေသော လူကို အရည်များများ ၀င်နိုင်သမျှ ၀င်အောင် တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုမှ ကယ်ဆယ်နိုင်ပါတယ်...
အကယ်၍ သွေးပေါင်တိုးနေပါက မိသားစုဆရာဝန်ထံမှာ အကြံညဏ်ရယူပြီး သင့်တင့်မှန်ကန်သည့် ဆေးဝါးသောက်သုံးမှု ၊ ကုသမှု ယူသင့်ပါတယ်. . . .မိမိဘာသာ ဆေးများ သောက်သုံးခြင်း ၊သောက်ရသည့် ပမာဏထက်ပို၍ သောက်ခြင်းများကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါ. ..
အဖြေ။ ။အရှေ့အနောက်၊ တောင်မြောက် မိုးဆင်၊ ခြိမ်းသံပေး မိုးဝေး
အဖြေ။ ။ကြီးသူပယ်ရှား၊ မြှောက်ထားလူငယ်၊ တိုင်းပြည်ရေး၊ ရှုပ်ထွေးပွေ
(၈) အမေး။ ။အိုးငယ်ချည်းနှီး၊ အိုးကြီးရေလျှံ၊အိုးကြီးကိုဘဲ၊ ရေဆွဲလောင်းပြန်။
အဖြေ။ ။မြို့တွင်းပွေရှုပ်၊ ခွန်တုတ်ကောက်ခံ၊ မြို့ပြင်ထွက်၊ ပြည့်နှက်စည်
(၁၀) အမေး။ ။တစ်အိုးတည်းချက်၊ အကျက်မညီ၊ ထမင်းမာဆတ်၊ ပျော့နပ်
(၁၃) အမေး။ ။အိမ်လုံး တောင်လုံး၊ ကျောက်တုံးကျောက်ဖျာ၊ ရေမှာ
Posted by Ayeit Chit at 00:31 No comments:
စိတ်ကခိုင်းတယ် မင်းပြန်ပြောလိုက်၊ မင်းကို ဒီလိုလာပြောနေတယ်၊ ငြိမ်ခံနေမှာလား၊ ငြိမ်ခံမနေနဲ့ ပြောပစ်လိုက် လုပ်ပစ်လိုက်လို့ တိုက်တွန်းတယ်။ မာနတရားက ထပ်ဦးစီးရင် သူလိုလူကများ ‘ငါ့’ကို လာပြောနေတယ်။ သူကဘယ်လောက်ကောင်းနေ မှန်နေလို့လဲ? ဘယ်လောက် တော်နေ တတ်နေလို့လဲ? ဘယ်လောက်သိနေတာမို့လဲ? ပြောပလိုက်စမ်းပါ ပြန်တုန့်ပြန်လိုက်လို့ တိုက်တွန်းတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 22:32 No comments:
ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲ တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရတာ လေးတစ်ခုပါ။ ဟောပြောသွားတဲ့ သူကလည်း Blog တစ်ခု
မှာဖတ်ဖူးတာလို့ပြောပါတယ်။ ဘယ်သူ့ Blog လို့ပြောမသွားတဲ့အတွက် မူရင်းရေးသူကို ကျွန်တော်လဲမသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
နာရီဟာရေဒီယို သတ္တိကြွထုတ်လွှင့်မှုအတော်မြင့်မားပါတယ်။ နာရီဟာသေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ၀တ်ဆင်ပြီး
အချိန်ကြာကြာအိပ်ခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးတွေအများကြီး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့
၂။ အမျိုးသမီးများ ဘရာ(အတွင်းခံအကျီင်္) ၀တ်ပြီးမအိပ်ပါနဲ့
အမေရိကန်မှ သုတေသနပညာရှင်များ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးများဟာ (၁၂)နာရီထက် ကျော်လွန်ပြီး
အတွင်းခံအကျီ(ဘရာ)ကိုဝတ်ဆင်ပါက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်များပါတယ်။ ဒါကြောင့်သက်တောင့်သက်သာ
နဲ့ လဲအိပ်ရ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အတွင်းခံအကျီ(ဘရာ)ချွတ် အိပ်ပါ။
မိမိလက်ကိုင်ဖုန်းကိုမိမိရဲ့အိပ်ရာနံဘေး(သို့) အနီးအနားမှာထားပြီး အိပ်ခြင်ဟာလဲ မကောင်းပါဘူး။ တစ်ချို့က ဖုန်း
ကို နိုးစက်အနေနဲ့ အသုံးပြုဖို့ဖုန်းကို ခေါင်းအုန်းဘေးမှာ ထားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအသုံးပြူခြင်တယ် ဆိုရင်လဲ မိမိ
အခန်းထဲက အိပ်ရာနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာ ထားပါ။ သုတေသနပညာရှင်များက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့
လက်ကိုင်ဖုန်းအပါအ၀င် တယ်လီဗေးရှင်းစက်တွေဟာ သံလိုက်လှိုင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်နေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ကြ
ပါတယ်။ အဲဒီသံလိုက်လှိုင်းတွေဟာ လူတွေရဲ့ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖုန်းကို အိပ်ရာဘေးမှာ ထားမအိပ်ပါနဲ့။
၄။ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး မအိပ်ပါနဲ့
ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်များကို မဖျက်ဘဲအိပ်တတ်သူတွေဟာ ရေရှည်မှာ အရေပြားကို ထိခိုက်စေ
နိုင်ပါတယ်။ မိပ်ကပ်လိမ်းပြီး အိပ်ခြင်းအားဖြင့် မိပ်ကပ်တွေဟာ အရေပြားပေါ်ရှိ ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့စေးပြီး
မှဲ့ခြောက်၊၀က်ခြ၊ံတင်းတိပ် အစရှိတဲ့ မျက်နှာအရေပြားပေါ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါ တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ညအိပ်ရာဝင်ရင် မျက်နှာကို စင်ကြယ်အောင်သစ်ပြီးမှ အိပ်ပါ။ မျက်နှာပြောင်နဲ့မအိပ်တတ်ရင်တော့ သနပ်ခါး
(တောင်နံကြီး၊ရှင်မတောင်) ကို ခပ်ပါးပါးလေး သွေးလိမ်းနိုင်ပါတယ်။
၅။ သူတစ်ပါးရဲ့ယောင်္ကျား (သို့) မိန်းများနဲ့အတူတူမအိပ်ပါနဲ့
နောက်ဆုံးတစ်ခကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့မဆိုင်ပေမယ့်လူမှုရေးအရ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မယားရှိသော
လင် နှင့် လင်ရှိသောမယား တွေနဲ့အတူတူမအိပ်ပါနဲ့။ အဲလိုအိပ်မိလျှင် သင့်အတွက် သေလောက်အောင် အရှက်ရစေ
နိုင်ပါတယ်။ လူမှုရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင် နယ်ပယ်ထဲမှာ သင်ဟာအလိုလိုနေရင်း ကျရှုံးသွားရပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုတစ်ခါ
အိပ်မိယုံနဲ့ သင်ဟာ အသက်ရှင်နေပေမယ့် ဘ၀ကတော့သေဆုံးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်
လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကာမပိုင်ရှိသော ယောင်္ကျား(သို့)မိန်းမ နဲ့အတူတူမအိပ်မိပါစေနှင့်။
အသက်ရှည်၊ကျန်းမာပြီး အိမ်မက်လှလှတွေနှင့်အတူ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်နိုင်ကြပါစေ.................
Posted by Ayeit Chit at 15:56 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 19:59 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 14:21 No comments:
•မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တုန်းက သာမာဝတီမိဖုရားထံဝယ် ခါးကုန်းနေသော ကျွန်မ တစ်ယောက်ရှိ၏။ ၎င်းအမည်မှာ "ခုဇ္ဖုတ္တရာ" မည်၏။ ၎င်းအား မိဖုရားမှ နေ့စဉ် ရှစ်အသပြာဖိုး ပန်းကိုဝယ်ခိုင်း၍ ဘုရားပန်းအိုးများကို လဲလှယ်စေ၏။ တစ်နေ့ ပန်းသည်၏ အိမ်၌ မြတ်စွာဘုရားကြွ၍ တရားချီးမြှင့်တော်မူစဉ် ကြုံကြိုက်၍ ပန်းဝယ်လာသူ ကျွန်မသည် တရားတော်ကို ရိုသေစွာ နားကြားခွင့် ရလိုက်လေသော် အလွန်ဉာဏ်ပညာ ကြီးရင့်ထက်မြက်သော ကျွန်မ ဖြစ်သဖြင့် ချက်ခြင်းပင် သောတာပန် တည်လေ၏။
သူဟာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ ဗဟုသုတ ဧတဒဂ် ရပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတစ်ပါးရဲ့ ခိုင်းဖတ် ကျွှန်ဖြစ်နေရပြီး ခါးကုန်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလည်း လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
သူဟာ ကဿပမြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တုန်းက သူဌေးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ညနေခင်း ရေချိုးပြီး တဲ့အချိန် သနပ်ခါးလူးပြီးတော့ မှန်ရှေ့မှာ အလှပြင်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရဟန္တာ ဘိက္ခူနီမတစ်ပါး၊ အိမ်ရောက်လာတယ်။ ဘိက္ခုနီမ ရောက်လာတော့ သနပ်ခါးလူးနေရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ပေါင်ဒါဘူး၊ မိတ်ကပ်ဘူးလေး က သူနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရောက်နေတယ်။ အဲဒီ နေရာကလည်း ခုန ဘိက္ခုနီမနဲ့ နီးတယ်။ အဲဒီတော့ သူက ထပြီးမယူချင်တာနဲ့ ပျင်းတာနဲ့...
အရှင်မ၊ အဲဒီ မိတ်ကပ်ဘူးလေး၊ အလှပြင်ဘူးလေး ခဏလှမ်းလိုက်စမ်းပါ လို့ ဘိက္ခုနီမကို လှမ်းပြီးတော့ ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ... ဘိက္ခုနီမက...
တကယ်လို့ ငါမယူပေးဘူးဆိုရင်တော့ ငါ့ကို စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်၊ ရဟန်းမ တစ်ပါးကို စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင် သူသေရင် ငရဲရောက်လိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ယူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လေရာ ဘ၀မှာ ကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငရဲကျတာထက်စာရင်တော့ ကျွှန်ဖြစ်ရတာက တော်ပါသေးတယ်။..ဆိုပြီး မိတ်ကပ်ဘူးလေးကို ယူပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးကို ကိုယ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာနွယ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခိုင်းခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွှန်ဖြစ်ရပါတယ်။
ခါးကုန်းရတာကတော့ ဘုရားမပွင့်မီ ဘ၀တစ်ခုမှာ ဗာရာဏသီပြည် နန်းတော်ထဲက ရံရွှေတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဗာရာဏသီနန်းတော်ထဲမှာ ပစ္စေက ဗုဒ္ဒါအရှင်မြတ် ရှစ်ပါး နေ့စဉ် ဆွမ်းခံကြွပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ပါးက နည်းနည်းခါးကုန်: နေတယ်။ အဲဒါကို ခုဇ္ဖုတ္တရာလောင်းလျာ ရံရွှေတော်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲပြီး တော့ စကြနောက်ကြ ပြီးဆိုရင် တစ်ခါတရံမှာ သူက ကမ္ဗလာအနီကြီးကို သင်္ကန်းလို လုပ်ပြီး ခြုံ၊ ရွှေဖလားကြီးကို သပိတ်လိုပိုက်ပြီးတော့ ငါတို့ နန်းတော်ထဲ ဆွမ်ခံကြွတဲ့ ဟို အရှင်မြတ်က ဒီလိုဒီလို ကုန်းတယ်ဆိုပြီးခါးကုန်တဲ့ပုံလုပ်ပြပါတယ်။ ကွယ်ရာမှာ အပျော်သဘောနဲ့ ပျောင်လှောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကာယကံရှင်ကို လက်ညှိုးထိုး စွတ်စွဲပြောဆို စော်ကားမှ အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး ၊ ကွယ်ရာမှာ အချင်းချင်းပြောဆိုရင် ၊ ကိုယ်တစ်ကိုယ်တည်း ပြောဆိုနေရင်လည်း အကုသိုလ်ကံ အထမြောက်တဲ့အကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီလို ပစ္စေက ဗုဒ္ဒါကို ရည်ညွန်းပြီးကွယ်ရာမှာ နောက်ပြောင်လိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီကံအကျိုးပေးက ဘ၀တိုင်းမှာ ခါးကုန်းရပါတယ်။
ကျွန်အဖြစ်နေရပြီး ခါးကုန်းနေရ ပေမဲ့ ဥာဏ်ကောင်းပြီး ဗဟုသုတပြည့်စုံပါတယ်။
အဲဒီ လိုပြည့်စုံတာကတော့ ပစ္စေက ဗုဒ္ဒါအရှင်မြတ်ရှစ်ပါး နန်းတော်ကို ဆွမ်းခံကြွတာ တစ်နေ့တော့ ပူနေတဲ့ နှို့ဃနာဆွမ်းတွေ လောင်းလှူလိုက်တယ်။ နို့ဃနာဆွမ်းတွေက ပူနေတော့ သပိတ်ကလည်း ပူတေယ် အဲဒီတော့ ပူနေတဲ့ သပိတ်ကို အရှင်မြတ်များ အေးဆေးပုံမှန်အတိုင်းမကိုင်နိုင်တော့ဘဲ ဟိုဘက်သည်ဘက် ပြောင်းလိုက်နဲ့  ဣနြေ္ဒမရဖြစ်နေချိန် မှာ ခါးကုန်းတာပြောင်ပြတဲ့ ရံရွှေတော်မလေးက သူ့လက်မှာ ပတ်ထားတဲ့ ရွှေလက်ကောက်ရှစ်ကွင်းကို ချွတ်လိုက်ပြီးတော့...အရှင်မြတ်တို့...
အသုံးပြုပါလို့ အပြီးအပိုင် လှူခဲ့ပါတယ်။ အပူဒဏ်သက်သာအောင် ရွှေလက်ကောက် လှူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကြောင့် ကိလေသာအပူတွေ
ငြိမ်းပြီးတော့ ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော် နှင့်တွေ့ကြုံနေခိုက် အကျင့်မှန်ကို ကောင်းစွာ ကျင့်ကြံပွားများခွင့်ရသောအချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုသုတ္တန် အားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မကောင်းသော ၀ဋ်ဒုက္ခအပေါင်းမှ မတွေ့ကြုံစေရန် အလို့ငှာ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ် တို့ကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းကြရန်လိုပါသည်။
“ ဣဒံ မေ ပုညံ အာသဝက္ခယာဝဟံ ဟောတု”
Posted by Ayeit Chit at 03:50 No comments: